Video:-Shirweynihii Deegaanka Puntland oo Garowe lagu soo gabagabeeyay – Idil News
Video:-Shirweynihii Deegaanka Puntland oo Garowe lagu soo gabagabeeyay
War murtiyeedka Shirweynihii 2aad ee Deegaanka
Puntland (Conference Communique)
Garowe 9th April, 2017
Shirweyanahii 2aad ee Deegaanka Puntland ayaa wuxuu ka dhacay Jaamacadda Puntland State University (PSU) ee magaalada Garoowe intii u dhaxaysay 8-9, April 2017. Shirkaas ayaa waxaa soo qabanqaabisey Wasaaradda Deegaanka oo gacan ka helaysa mashruuca “Deegaankaagu waa Noloshaada” oo ay fuliyaan hay’adaha CARE iyo ADESO uuna maalgeliyo Midowga Yurub.
Shirweynaha waxaa ka soo qayb galay Madaxweyne Ku xigeenka Dowladda Puntland ahna kusimaha Madaxweynaha, Guddoomiye ku xigeenka Golaha Shacabka ahna ku simaha Guddoomiyaha Golaha Shacabka Puntlnad, Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka, Wasiirada Wasaaradaha Caafimaadka, Waxbarashada, Caddaaladda, Haweenka iyo Qoyska, Kaluumaysiga, Howlaha Guud iyo Guriyeynta, iyo Dastuurka iyo Arrimaha Federalka, Guddoomiyeyaasha 9-ka Gobo lee Puntland, Agaasimayaasha guud ee Caddaaladda, Arrimaha Gudaha, Agaasimaha Qurba-joogta Puntland, Guddoomiyeyaasha Degmooyinka Eyl, Jariiban, Bayla, Baargaal, Burtinle, Dhahar, Iskushuban, Baran, Qardho, Rako, Galdogob, Taleex, Madaxda Wasaaradda Deegaanka ee ka howlgala Xafiisyada Wasaaradda Deegaanka ee heer Gobol iyo heer Degmo, masuuliyiin matalaysay bulshada rayidka Puntland iyo Bahda Tacliinta Sare iyo cilmi baarista Puntland. Shirweynaha waxaa si rasmi ah u furay Madaxweyne ku xigeenka Dowladda Puntland, waxaana looga gol-lahaa ujeedooyinka soo socda:
In la curiyo wada xaajoodyo kudhisan is fahan dhexmara daneeyayaasha ay ka dhaxayso ilaalinta iyo dhawrista Khayraadka dabiiciga ah ee Puntland.
In la iftiimiyo xaaladda dhabta ah ee ka jira deegaanka Puntland iyadoo lala xiriirinayo hab nololeedka bulsho waynta Puntland
Soo bandhigidda xaaladda abaareed ee Puntland iyo soo jeedinta hababka loo maarayn karo saamaynta abaaraha iyo isbadalka cimiladu ku yeesheen deegaanka Puntland.
Baahinta iyo faafinta guulihii laga gaaray iyo casharadii laga bartay mashruuca badbaadinta khayraadka dabiiciga ah.
Guud ahaan Shirweynaha waxaa lagu falan qeeyey laguna soo bandhigay arimaha soo socda:
Dhaqan gelinta shuruucda iyo siyaasadaha ilaalinta deegaanka
Isbedelka cimilada, la tacaalida, la qabsiga abaaraha iyo ka faa’iidaysiga biyaha roobka
Dhowrista, ilaalinta iyo horumarinta dhuldaaqsimeedka iyo duur joogta
Doorka bulshadu ay ku leedahay maaraynta khayraadka dabiiciga ah
In la helo ilo tamareed badiil u noqon kara gubidda Dhuxusha.
Waxaa kaloo mudadii uu socday shirweynuhu la soo bandhigay waxqabadkii Wasaaradda deegaanka ee ku aadanaa la tacaalida dhibaatooyinka deegaanka oo ay ka mid yihiin ka faa’iidaysiga biyaha roobka iyo in dalka laga hirgaliyo biyo xireeno iyo biyo qabatinno loo baxsado xiliyadda abaaraha isla markaana loo yareeyo saamaynta isbedelada cimilada ay ku yeelatay dalkeena. Waxaa sidoo kale shirweynaha lagu soo bandhigay siyaasadaha iyo sharciyada deegaanka, iyo dib u soo nooleynta dhul daaqsimeedka, maamul baahinta iyo kobcinta kartida Wasaaradda Deegaanka.
Gabagabadii shirka ayaa waxaa la isku raacay qodobadaan soo socda:
In Wasaaradda deegaanku ay dar-dar geliso ka faa’iidaysiga biyaha roobka isla markaasna ay ka hirgaliso gobolada Puntland oo dhan biya xireeno sidoo kalena ay horumariso farsamooyinka casriga ah ee ka faa’iidaysiga biyaha roobka ee badda ku shubmaya mar kasta oo roob da’o.
Wuxuu shirweynuhu aad ugu riyaaqay una soo dhaweeyey waxqabadka Wasaaradda ee ku aadan ka faa’iidaysiga biyaha roobka iyo dhisidda Biyo- xireenada, taas oo laf dhabar u ah nolosha reer miyiga iyo u adkeysiga saamaynta abaaraha iyo isbedelka cimilada.
Waxaa mahad cellin weyn loo soo jeediyey Deeq bixiyaha Midowga Yurub oo taageero dhaqaalle oo weyn u fidiyey Puntland xaga Degaanka iyo weliba dhisidda Wasaaradda Degaanka. Waxaa sidoo kale mahadcellin ballaaran loo soo jeediyey UNDP/GEF, World Bank iyo hay’adaha caalamiga ah sida CARE International iyo ADESO kuwaas oo Wasaaradda Deegaanka kala shaqeeyey howlaha dib u noolaynta Degaanka Puntland iyo kor u qaadida awoodda Wasaaradda Deegaanka,hoos ka daawo muuqaalka-.